Candidates6 – NLD Yangon
ဦးအောင်ကျော်ကျော်ဦး
Name (အမည်) – ဦးအောင်ကျော်ကျော်ဦး Gender (ကျား/မ) – ကျား Date of Birth (မွေးသက္ကရာဇ်) – Sun, 12 Jan 1975 Legislature (ဥပဒေပြု လွှတ်တော်)- ပြည်သူ့လွှတ်တော် Education (ပညာရေး) – A.G.T.I (food of chemical) Occupation (လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်) – ကိုယ်ပိုင်စတိုးဆိုင် Ethnicity (လူမျိုး) – ဗမာ Religion (ဘာသာ) – ဗုဒ္ဓ Ward Village (အမြဲနေရပ် လိပ်စာ) – လှိုင်မြို့နယ်၊၁၄ရပ်ကွက် Constituency_Name_English – Hlaing Pyithu […]
Name(အမည်) – ဦးအေးနိုင် Gender(ကျာ:/မ) – ကျား Date of Birth (မွေးသက္ကရာဇ်) – 03 Oct 1963 Legislature (ဥပဒေပြု လွှတ်တော်) – ပြည်သူ့လွှတ်တော် Education (ပညာရေး) – ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(သမိုင်းဘာသာရပ်) Occupation (လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်) – အဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုရုံးအဖွဲ့ဝင် Ethnicity (လူမျိုး) – ဗမာ Religion (ဘာသာ) – ဗုဒ္ဓ Ward Village (အမြဲနေရပ် လိပ်စာ) – ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်းမြို့နယ်)၊(၂၀)ရပ်ကွက် constituency__name_English – South Dagon Pyithu Hluttaw Constituency constituency__name – တောင်ဒဂုံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် constituency__parent […]
Name(အမည်) – ဦးမြင့်လွင် Gender(ကျာ:/မ) – ကျား Date of Birth (မွေးသက္ကရာဇ်) – 04 Nov 1953 Legislature (ဥပဒေပြု လွှတ်တော်) – ပြည်သူ့လွှတ်တော် Education (ပညာရေး) – ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(မြန်မာစာ) Occupation (လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်) – စာရေးဆရာ Ethnicity (လူမျိုး) – ဗမာ Religion (ဘာသာ) – ဗုဒ္ဓ Ward Village (အမြဲနေရပ် လိပ်စာ) – တလုတ္ထော်ကျေးရွာအုပ်စု constituency__name_English – Twantay Pyithu Hluttaw Constituency constituency__name – တွံတေးမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် constituency__parent – […]
Name (အမည်) – ဦးမြင့်လွင် Gender (ကျား/မ) – ကျား Date of Birth (မွေးသက္ကရာဇ်) – Wed, 24 Aug 1960 Legislature (ဥပဒေပြု လွှတ်တော်)- ပြည်သူ့လွှတ်တော် Education (ပညာရေး)- LLB၊ DBL၊ Post Graduate Diploma in Legal Aspects of Marine Affairs(Cardiff) Occupation (လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်) – တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ Ethnicity (လူမျိုး) – ဗမာ Religion (ဘာသာ) – ဗုဒ္ဓ Ward Village (အမြဲနေရပ် လိပ်စာ) – မေတ္တာညွန့် Constituency__name_English […]
Name(အမည်) – ဦးမြတ်မင်းသူ Gender(ကျာ:/မ) – ကျား Date of Birth (မွေးသက္ကရာဇ်) – 04 Jun 1983 Legislature (ဥပဒေပြု လွှတ်တော်) – တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် လွှတ်တော် Education (ပညာရေး) – B.Sc(Geology)၊ Diploma in Gem Identification Occupation (လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်) – ပရိဘောဂ(မိသားစုတစ်နိုင်တပိုင်လုပ်ငန်း) Ethnicity (လူမျိုး) – ဗမာ Religion (ဘာသာ) – ဗုဒ္ဓ Ward Village (အမြဲနေရပ် လိပ်စာ) – (၉)ရပ်ကွက် constituency__name_English – Hlaing Tharyar Constituency constituency__name – လှိုင်သာယာမဲဆန္ဒနယ် […]
Name(အမည်) – ဦးဖြိုးမင်းသိန်း Gender(ကျာ:/မ) – ကျား Date of Birth (မွေးသက္ကရာဇ်) – 12 Apr 1969 Legislature (ဥပဒေပြု လွှတ်တော်)- တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် လွှတ်တော် Education (ပညာရေး)- ဒုတိယနှစ် (ရူပဗေဒ) Occupation (လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်) – ကုန်သည် Ethnicity (လူမျိုး) – ဗမာ Religion (ဘာသာ) – ဗုဒ္ဓ Ward Village (အမြဲနေရပ် လိပ်စာ) – – Constituency__name_English – Hlegu Region Hluttaw Constituency Constituency__name – လှည်းကူးမဲဆန္ဒနယ် Constituency__parent – ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Mother […]
Name(အမည်) – ဒေါက်တာ မြတ်ဥာဏစိုး Gender(ကျား/မ) – ကျား Date of Birth (မွေးသက္ကရာဇ်) – 25 Jun 1970 Legislature (ဥပဒေပြု လွှတ်တော်)- အမျိုးသားလွှတ်တော် Education (ပညာရေး)- B.D.S၊ F.I.C.C.D.E၊ Cert in International Legislative Drafting(USA) Occupation (လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်) – အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် Ethnicity (လူမျိုး) – ဗမာ Religion (ဘာသာ) – ဗုဒ္ဓ Ward Village (အမြဲနေရပ် လိပ်စာ) – မေတ္တာညွန့် ရပ်ကွက် Constituency__name_English – Amyotha Hluttaw Constituency […]
Name(အမည်) – ဒေါက်တာခင်မောင်မောင် Gender(ကျာ:/မ) – ကျား Date of Birth (မွေးသက္ကရာဇ်) – 07 Oct 1957 Legislature (ဥပဒေပြု လွှတ်တော်) – ပြည်သူ့လွှတ်တော် Education (ပညာရေး) – B.V.S(Rgn)၊ DA.H(R.C)၊H.G.P Occupation (လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်) – တိ/မွေးကုဆရာဝန်ကြီး +မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း Ethnicity (လူမျိုး) – ဗမာ Religion (ဘာသာ) – ဗုဒ္ဓ Ward Village (အမြဲနေရပ် လိပ်စာ) – (၄၁) တိုးချဲ့ဒဂုံမြောက် constituency__name_English – North Dagon Pyithu Hluttaw Constituency constituency__name – မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် […]
Name (အမည်) – ဒေါက်တာစိန်ဝင်း Gender (ကျား/မ) – ကျား Date of Birth (မွေးသက္ကရာဇ်) – Mon, 20 Oct 1958 Legislature (ဥပဒေပြု လွှတ်တော်)- တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် လွှတ်တော် Education (ပညာရေး) – အမ်ဘီဘီအက်စ်(ရန်ကုန်) Occupation (လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်) – အထွေထွေကုဆရာဝန်(ပြင်ပဆေးကုခန်း) Ethnicity (လူမျိုး) – ဗမာ Religion (ဘာသာ) – ဗုဒ္ဓ Ward Village (အမြဲနေရပ် လိပ်စာ) – အမှတ်(၈)ရပ်ကွက် Constituency_Name_English – Constituency_Name -ရွှေပြည်သာမဲဆန္ဒနယ် Constituency_Parent – ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Mother […]
Name (အမည်) – ဒေါက်တာစိန်မြအေး Gender (ကျား/မ) – ကျား Date of Birth (မွေးသက္ကရာဇ်) – Sun, 04 Aug 1968 Legislature (ဥပဒေပြု လွှတ်တော်)- ပြည်သူ့လွှတ်တော် Education (ပညာရေး) – BDS၊Dip DSc (GP) H.G.P Occupation (လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်) – သွားနှင့်ခံတွင်းဆရာဝန် Ethnicity (လူမျိုး) – ဗမာ Religion (ဘာသာ) – ဗုဒ္ဓ Ward Village (အမြဲနေရပ် လိပ်စာ) – (ဂ)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာ Constituency_Name_English – Dala Pyithu Hluttaw […]
Name(အမည်) – ဒေါက်တာမျိုးအောင် Gender(ကျာ:/မ) – ကျား Date of Birth (မွေးသက္ကရာဇ်) – 16 Feb 1951 Legislature (ဥပဒေပြု လွှတ်တော်) – ပြည်သူ့လွှတ်တော် Education (ပညာရေး) – M.B.B.S Occupation (လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်) – ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် Ethnicity (လူမျိုး) – ဗမာ Religion (ဘာသာ) – ဗုဒ္ဓ Ward Village (အမြဲနေရပ် လိပ်စာ) – (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံအရှေ့ constituency__name_English – East Dagon Pyithu Hluttaw Constituency constituency__name – ဒဂုံအရှေ့ပိုင်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် […]
Name (အမည်) – ဒေါက်တာသက်သက်ခိုင် Gender (ကျာ:/မ) – မ Date of Birth (မွေးသက္ကရာဇ်) – Fri, 18 Aug 1967 Legislature (ဥပဒေပြု လွှတ်တော်)- ပြည်သူ့လွှတ်တော် Education (ပညာရေး)- M.B.B.S၊ Institute of Medicine(1)၊Yangon၊Myanmar. MBA(General Management) Institute of Economics၊ Yangon. MBA(Nanyang Fellows)၊ Nanyang Fellows Program၊ Nanyang Business School၊ Nanyang Technological University၊ Singapore၊ International Management Program၊ MIT Sloan School of Management၊ MA၊ USA၊ […]
Name(အမည်) – ဒေါက်တာသန်းဝင်း Gender(ကျား/မ) – ကျား Date of Birth (မွေးသက္ကရာဇ်) – 18 Nov 1949 Legislature (ဥပဒေပြု လွှတ်တော်)- ပြည်သူ့လွှတ်တော် Education (ပညာရေး)- အမ်ဘီဘီအက်စ်(ရန်ကုန်) Occupation (လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်) – လက်ရှိ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် Ethnicity (လူမျိုး) – ဗမာ Religion (ဘာသာ) – ဗုဒ္ဓ Ward Village (အမြဲနေရပ် လိပ်စာ) – (ဃ)ရပ်ကွက် Constituency__name_English – North Okkalapa Pyithu Hluttaw Constituency Constituency__name – မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် […]
Name(အမည်) – ဒေါက်တာသန်းမြင့် Gender(ကျား/မ) – ကျား Date of Birth (မွေးသက္ကရာဇ်) – 17 Jan 1943 Legislature (ဥပဒေပြု လွှတ်တော်)- ပြည်သူ့လွှတ်တော် Education (ပညာရေး)- B.Ecom(Ygn); M.Sc(USA);Ph.D(USA); DipPM(South Africa) Occupation (လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်) – ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင် (အချိန်ပိုင်း) ၊ Free Ways Services Co.Ltd. ရန်ကုန် Ethnicity (လူမျိုး) – ဗမာ Religion (ဘာသာ) – ဗုဒ္ဓ Ward Village (အမြဲနေရပ် လိပ်စာ) – အမှတ်(၄)ရပ်ကွက် Constituency__name_English – HlaingThaya […]
Name(အမည်) – ဒေါက်တာကျော်ဇင်ဦး Gender(ကျား/မ) – ကျား Date of Birth (မွေးသက္ကရာဇ်) – 01 Feb 1982 Legislature (ဥပဒေပြု လွှတ်တော်)- တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် လွှတ်တော် Education (ပညာရေး) – M.B.B.S(YGN) Occupation (လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်) – ဆရာဝန် / ငါးမွေးမြူရေး Ethnicity (လူမျိုး) – ဗမာ Religion (ဘာသာ) – ဗုဒ္ဓ Ward Village (အမြဲနေရပ် လိပ်စာ) – ဈေးသစ်ရပ်ကွက် Constituency__name_English – Twantay State or Region Hluttaw Constituency(1) […]
Name(အမည်) – ဒေါက်တာစောနိုင် Gender(ကျား/မ) – ကျား Date of Birth (မွေးသက္ကရာဇ်) – 22 Jul 1969 Legislature (ဥပဒေပြု လွှတ်တော်)- ပြည်သူ့လွှတ်တော် Education (ပညာရေး)- B.D.S၊Dip D.Sc Occupation (လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်) – သွားဘက်ဆိုင်ရာအထူးကုဆရာဝန်ကြီး Ethnicity (လူမျိုး) – ဗမာ Religion (ဘာသာ) – ဗုဒ္ဓ Ward Village (အမြဲနေရပ် လိပ်စာ) – (၇)ရပ်ကွက် Constituency__name_English – South Okkalapa Pyithu Hluttaw Constituency Constituency__name – တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် […]
Name(အမည်) – ဒေါက်တာဌေးကြွယ် Gender(ကျာ:/မ) – ကျား Date of Birth (မွေးသက္ကရာဇ်) – 07 Jul 1951 Legislature (ဥပဒေပြု လွှတ်တော်)- အမျိုးသားလွှတ်တော် Education (ပညာရေး)- M.B.B.S Occupation (လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်) – ပြင်ပအထွေထွေဆေးကုခန်း Ethnicity (လူမျိုး) – မြန်မာ Religion (ဘာသာ) – ဗုဒ္ဓ Ward Village (အမြဲနေရပ် လိပ်စာ) – ဃ/ရပ်ကွက် ၊ မ/ဥက္ကလာပမြို့နယ် Constituency__name_English – Amyotha Hluttaw Constituency No (1) Constituency__name – အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) Constituency__parent […]
Name (အမည်) – Gender (ကျား/မ) – မ Date of Birth (မွေးသက္ကရာဇ်) – Wed, 08 Mar 1950 Legislature (ဥပဒေပြု လွှတ်တော်)- ပြည်သူ့လွှတ်တော် Education (ပညာရေး) – M.B.B.S(Rgn) Occupation (လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်) – ဆရာဝန် Ethnicity (လူမျိုး) – ဗမာ Religion (ဘာသာ) – ဗုဒ္ဓ Ward Village (အမြဲနေရပ် လိပ်စာ) – (၇)ရပ်ကွက်၊မရမ်းကုန်း၊ Constituency_Name_English – Mayangon Pyithu Hluttaw Constituency Constituency_Name – မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် […]
Name(အမည်) – ဒေါက်တာဝေဖြိုးအောင် Gender(ကျား/မ) – ကျား Date of Birth (မွေးသက္ကရာဇ်) – 15 May 1985 Legislature (ဥပဒေပြု လွှတ်တော်)- ပြည်သူ့လွှတ်တော် Education (ပညာရေး)- M.B.,B.S (Ygn) Occupation (လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်) – ဆရာဝန် Ethnicity (လူမျိုး) – ဗမာ Religion (ဘာသာ) – ဗုဒ္ဓ Ward Village (အမြဲနေရပ် လိပ်စာ) – ၄-မြောက်ရပ်ကွက် Constituency__name_English – Thaketa Pyithu Hluttaw Constituency Constituency__name – သာကေတမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် Constituency__parent […]
Name(အမည်) – ဒေါက်တာအေးမင်း Gender(ကျာ:/မ) – ကျား Date of Birth (မွေးသက္ကရာဇ်) – 02 Nov 1958 Legislature (ဥပဒေပြု လွှတ်တော်) – ပြည်သူ့လွှတ်တော် Education (ပညာရေး) – M.B.B.S (RGN)၊ Dip Med Sc (Family Medicine) Occupation (လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်) – ပြင်ပဆေးကုခန်းတာဝန်ကြီးခံဆရာဝန်ကြီး Ethnicity (လူမျိုး) – ဗမာ Religion (ဘာသာ) – ဗုဒ္ဓ Ward Village (အမြဲနေရပ် လိပ်စာ) – အမှတ်(၃)ရပ်ကွက် constituency__name_English – Khayan Pyithu Hluttaw Constituency constituency__name […]